Inona no atao hoe endrika sary dizitaly? | Creatives Online
Inona no atao hoe endrika sary dizitaly?
Mary Rose | | Graphic Design
La ImportANCia do dia ataovy hoe:tsy misy gráfico, en el mundaro tena, es un mananaa de está en bgisa de nydo el mundaro. Y tsy misy es for olonaos, ya de, en la tenaidad, orinasa, marika, fikambanana ary andrim-panjakana dia mifantoka bebe kokoa amin'ny famolavolana sary, y ny betsakaas Las olonaas de se Avy amin'ny dafaka aho amin'ny MPAMPIANATRAes-pirenenaidad y Avy amin'ny dicfiolahanaON a East sehatra.
Ny famolavolana sary dia sehatra iray izay, mihamaro hatrany, ny asan'ny matihanina sy ny mpianatra amin'ity sehatra ity dia ilaina, satria, isaky ny, ny haino aman-jery, ny dokam-barotra, ny bilaogy, ny fampiharana amin'ny Internet ary ny tambajotra ankoatry ny hafa, dia lasa velona hatrany izy ireo fiaraha-monina. In hamaritraitIvana, Ny famolavolana sary dia mihamitombo eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ary izany dia mitarika antsika hanatsoaka hevitra fa mitombo ny lanjany eo amin'ny fiainantsika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny atao hoe endrika sary dizitaly isika; ary hasehonay anao ny fahasamihafana lehibe amin'ny endrika sary nentim-paharazana.
1 Inona no atao hoe endrika sary dizitaly?
2 Ny fahasamihafana misy eo amin'ny famolavolana sary sy ny famolavolana sary nomerika
2.1 Ny loko
2.2 Ny mpihaino kendrena
2.3 Ny endrika hiasa
2.4 Fotoana asa
Ny famolavolana sary nomerika dia ny fampiasana ny fahaiza-manao ara-teknolojia sy fitaovana famolavolana nomerika ho an'ny famoronana sary, otRosa zavatraetos y lahatsoratrao usMandeha aho solosaina. Ity taranja famolavolana ity dia mifantoka amin'ny famolavolana sary ho an'ny haino aman-jery nomerika. Nanjary malaza ity endrika ity noho ny pejy web, bilaogy ary tambajotra sosialy. Eny, eto no ahafahan'ny mpamorona sary mampiseho ny asany ary mifandray amin'ny mpanjifa sy orinasa amin'ny asa ho avy.
En años Rechahatsapaes, el dia ataovy hoe:tsy misy gráfico Hafanàm-po an ha hiditrarado betsakaa malazaidad, y la auprèsatilidad de Las etoramhahatsapaas Hafanàm-po anes ha fahazoan-dalanalasa de se dearanjara asale una nueva área do dia ataovy hoe:tsy misy gráfico. izay ny mpanohanayectos pueden llegar a to be tenaara-e mpamoronaivos. Tamin'ny voalohany, ny famolavolana sary dia noheverina ho hetsika iray izay manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Na izany aza, ankehitriny dia niova io famaritana io. Amin'izao fotoana izao, mifantoka amin'ny famahana olana sy fanamby amin'ny fifandraisana izy.
DifFa nycias entre dia ataovy hoe:tsy misy gráfico y dia ataovy hoe:tsy misy gráfico Hafanàm-po an
En un TORO LALAN'NYio se han usado Las PalabRas dia ataovy hoe:tsy misy gráfico y dia ataovy hoe:tsy misy sary nomerika for hamaritrair la ihanya MPAMPIANATRAesiON. Despuary, amin'ny el pas deo do tiempo, han apdiaclasa otras de han heCho de se difFa nycien. ny ejemplo, Ny famolavolana sary dia taranja ara-javakanto mifototra amin'ny dingana famoronana. ny otro lado, el Ny famolavolana sary dizitaly dia teknika famolavolana sary izay mifototra amin'ny fampiasana media nomerika.
Raha fintinina, ny famoronana sary dia famoronana ara-javakanto, raha ny nomerika dia teknika mifototra amin'ny fampiasana fitaovana nomerika. Ny tena manova tanteraka dia ny tontolo iainana. Ankoatra izany, misy fahasamihafana mazava efatra eo amin'izy ireo:
Ho an'ny famolavolana sary nentim-paharazana dia mahita media printy izahay. Noho izany, ny iray amin'ireo tohana lehibe indrindra dia ny taratasy, na ho an'ny dokam-barotra an-tsoratra, dokam-barotra na katalaogy. Ho an'ireo fanontana ireo dia ilaina ny fomba loko hafa ankoatra ny nomerika ary izany dia CMYK. Amin'ity karazana ity, ny mpamorona dia afaka manandrana ny fanontana mba hahazoana antoka fa izy ireo no loko marina.
Raha ho an'ny nomerika, ny maody loko dia RGB. Satria izy ireo dia miasa miaraka amin'ny fitaovana sy programa nomerika, ary ny mpanara-maso dia tsy maintsy amboarina mba tsy hisian'ny fahadisoana amin'ny ho avy amin'ny fijerena ny asa.
Ny mpihaino kendrena
Tsy mitovy ny misarika mpihaino voasarika amin'ny haino aman-jery ara-batana toy ny amin'ny nomerika. Ny voalohany dia tsy maintsy manao fahatsapana voalohany tsara mba hiezaka hisarihana ny besinimaro sy hisarika ny sain'izy ireo. Ity farany dia tokony hahatonga ny mpihaino kendrena hihazona ny sainy araka izay azo atao. Mba hahafahan'izy ireo mitsidika ny tranokalanao, ny tambajotra sosialy na ny bilaoginao mba hividianany vokatra na serivisy.
Ny endrika hiasa
El dia ataovy hoe:tsy misy gráfico Hafanàm-po an ha cnaiado ny maneryny la irayvanim-potoana en de ny dia ataovy hoe:ñadvavaka gráficos trabajan. Amin'izao vanim-potoana vaovao amin'ny famolavolana sary izao, tsy mila mandany fotoana be amin'ny asa an-taratasy ny mpamorona sary, satria vita mivantana amin'ny efijery solosaina ny asa. Amin'ny fomba mahazatra, ny mpamorona sary dia mamolavola amin'ny taratasy sy pensilihazo.
Nanova ny fomba fiasany ny fisehoan'ny teknika nomerika. Amin'izao fotoana izao dia misy programa rindrambaiko ampiasaina, toy ny fonosana Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign…). Amin'ny haino aman-jery nomerika, tsy maintsy miasa miaraka amin'ny habe efa voafaritra mialoha ianao mba hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fampiharana, tranokala ary doka nomerika.
Samy mitaky be dia be amin'ny tsenan'ny asa ny mpamorona ankehitriny. Miankina amin'ny fahaiza-manao manokana izany, ireo mpamorona sary nentim-paharazana dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fiasana amin'ny orinasa natokana ho an'ny haino aman-jery printy. Raha toa ka hahafeno fepetra bebe kokoa amin'ny orinasa nomerika ny mpamorona sary nomerika, toy ny masoivoho dokam-barotra nomerika, studio design, sns.
El trabtongolo gasy fangatahanaomaly de mpamoronaividad, así de esto lo habidy un puesto asa de puede llegar a to be muy gratificalohan'ny. Raha toa ka asa maro be no tadiavinao miaraka amin'ny fahafaha-mandroso isan-karazany, tsy isalasalana fa anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Inona no atao hoe endrika sary dizitaly?
Inona no atao hoe debranding?
Ahoana ny famolavolana bokikely dokam-barotra